nepalpolice – Nepaliko Aawaj
चितवन । काठमाण्डौबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको कार त्रिसुलीमा खस्दा ३ जना बेपत्ता भएका छन् भने १ जना घाईते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार गएराती अन्दाजी ११ः४५ बजेको समयमा ईच्छाकामना गालपालिका वडा नं ५ नाग्दी खोला स्थित पृथ्वी राजमार्गमा काठमाण्डौबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको ग२च ४९१८ नम्बरको कार अनियन्त्रीत भई सडकबाट करिब ३५ मिटर तल त्रिसुली नदीमा ...
महेश पाण्डे चितवन । पूर्वी चितवन अन्र्तगत पर्ने रत्ननगरको टिकौलीदेखि तरकारी चोक सम्म सिसी क्यामरा राखिएको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरले मोनिटरिङ गर्ने गरि रत्ननगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र सिसी क्यामरा जडान गरिएको हो । ईलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीले आज (सोमबार) एक कार्यक्रम गरि सो मोनिटरिङ रुमको उद्घाटन ग¥यो । क्यामरा जडान पश्चात दुर्घटना न्यनिकरण हुने बिश्वास लिइएको छ । ...
चितवन । कहिले काँही सामान्य लाग्ने ठाउँले मृत्यु कुरेर बसेको हुन्छ भन्ने उदाहरण हो यो । यो घटना हो भरतपुर, चितवनको । जसमा चिप्लिएर नहरमा खसेका साथी विवेकलाई बचाउन खोज्दा तर अंकित आफु पनि अस्ताएका छन् । बुधवार दिउँसो ३ः५५ बजेको समयमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.—२ क्षेत्रपुरमा रहेको नहरमा डुबी २ जना वर्ष १६ का अंकित जोशी र वर्ष १४ का विवेक शर्माको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएक...
चितवन । माछापुच्छ्रे बैंक रत्ननगर शाखाको एटिएम तोडफोड गरी चोरी गर्न खोज्ने भरत परियार पक्राउ परेका छन् । पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१ बकुलहर क्वोष्ट मोडल कलेज छिर्ने बाटोमा रहेका माछापुच्छ्रे बैंकको एटिएम बुथभित्र बुधवार राति तोडफोड गरी चोरी गर्न खोज्ने रत्ननगर–२ आदर्शनगर बस्ने २८ वर्षीय पुष्प भनिने भरत परियारलाई इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरले पक्राउ गरेको हो । रात्र...
महेश पाण्डे चितवन । चितवनको राप्तिमा मृतक भेटिएकी सुजिता भण्डारीको केशमा चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी ओम प्रसाद अधिकारीले आन्दोलन गर्नकै लागि भनेर काठमाण्डौबाट मानिसहरु प्लनेमा चढेर चितवन आएको बताएका छन् । बिहिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसपी अधिकारीले सो कुरा बताएका हुन् । अधिकारीले घटनालाई अतिरञ्जित गर्न केही मानिसहरु काठमाण्डौबाटनै फ्ल...
भरतपुरमा फलाम बोकेको ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिदा एकको मृत्यु, तिन घाइते
चितवन । भरतपुरमा फलाम बोकेका ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिदा एकको मृत्यु भएको छ भने ३ जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार आज (आइतबार) दिउसो ०२ः५५ बजेको समयमा भरतपुर म.न.पा—१, आँपटारी स्थित पानी ट्याङकी ओरालोमा फलाम बोकेर नारायणगढबाट लम्जुङतर्फ गईरहेको ग१ख ९७५६ नम्बरको ट्रकले बिपरीत दिशाबाट आईरहेको प्रदेश ३–००३प ३५४३ नम्बरको स्कुटर र प्रदेश २–०३...
गैँडाको आक्रमणमा परि कालिका नगरपालिका निवासी एक महिलाको मृत्यु
चितवन । गैँडाको आक्रमणमा परि कालिका नगरपालिका वडा नं. १ निवासी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार आज (शनिबार) दिउसो १२ः३५ बजेको समयमा कालिका न.पा. १ मा रहेको चतुर्मुखी सामुदायिक वनमा सोही स्थानमा बस्ने ५६ वर्षकी तेज कुमारी सुनुवारको मृत्यु भएको हो । मृतक सुनुवार जंगलमा घांस तथा न्युरो खोज्न गएको अवस्थामा गैंडाले आक्रमण गरि गम्भीर ...
ईलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरलाई नेविसंघको स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग
चितवन । ईलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरलाई नेविसंघले स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गरेको छ । आज (सोमबार) नेविसंघ जिल्ला समिति, नेपाल तरुण दल जिल्ला समिति तथा नेविसंघ रत्ननगरले संयुक्त रुपमा ईलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरलाई स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण गरेको हो । नेविसंघ जिल्ला समिति उपाध्यक्ष आयुष चन्द्र श्रेष्ठले कोरोना महामारीमा सधै फिल्डमा रहने प्रहरीलाई केहि भएपनि सहज होस भन...